हामीले अपनाइरहेको योग विधी कति प्रभावशाली छ ? असली अभ्यास भइरहेको छ त ? - ज्ञानविज्ञान
अहिले योग-अभ्यासको लहर चलेको छ । हरेको घर-घरमा योगको अभ्यास भइरहेको छ । हामीमध्ये कतिले योग सेन्टरमा धाएर योगको विधीहरु सिकिरहेका छौं । कतिले टेलिभिजनबाट योग विधी पच्छ्याइरहेका छौं । कतिले युट्युव जस्ता माध्यामलाई आफ्नो योग गुरु बनाइरहेका छन् ।
यद्यपी हामीले यसरी अपनाइरहेको योग विधी कति प्रभावशाली छ ? के हामीले सही ढंगले योगको अभ्यास गरिरहेका छौं ? यसबारे भने प्रश्न उठाउनुपर्छ । किनभने कतिपयले योगबाट तुरुन्तै स्वास्थ्य लाभ प्राप्त भएको अनुभव गर्छन् । कतिले यसबाट खास लाभ मिलेको छनक नै पाउँदैनन् । कतिपयलाई भने यसको साइड इफेक्ट देखिन सक्छ ।
अहिले हामीले जुन योग विधी अपनाइरहेका छौं, त्यसको सुत्रधार महषिर् पतञ्जली हुन् । उनले योग अभ्यासको विधीहरु पहिल्याएका थिए । र, आफैमाथि सफल अभ्यास गरेका थिए ।
आज योगले विश्वव्यापी रुप लिइसकेको छ । विश्वको अर्को गोलार्द्धमा पनि योग उत्तिकै लोकपि्रय छ, जति यहाँ छ । भारतका एक चर्चित योग गुरुले आफ्नो पुस्तक ‘लाइट अन लाइफ’ मा उल्लेख गरेका छन्, ‘पतन्जलिलाई योगका पिता भनिन्छ । उनी एक योगी तथा एक ज्ञानी थिए, जो इशापूर्व पाँच शताब्दीअघि जन्मिएका थिए । उनले योगीको जीवन र अभ्यासको जानकारी जम्मा गरे र त्यसलाई विस्तार गरे । उनले योग सूत्र लेखे, खासमा उनी योगको प्रमाण, चेतना र मानवीय परिस्थितीको सूत्र हुन् ।’
हरिद्वारस्थित पतञ्जलि युनिभर्सिटीका योग प्रोफेसर संजय सिंह भन्छन्, ‘योग ब्रम्हान्ड जतिकै प्राचिन हो । योग स्वयम् ईश्वरद्वारा सिकाइएको अभ्यास हो । योगको उदेश्य जीवनलाई साँचो रुपमा बुझ्नु हो । र, आफुलाई जीवन र मृत्युको चक्रबाट अलग गर्नु हो ।’
संस्कृतमा योग शब्दको अर्थ जोड्नु वा मिलाउनु हो । सिंह भन्छन्, ‘आफ्नो असली स्वरुपलाई ईश्वरमा एकाकार गर्नु हो । स्वयम्लाई जान्नु हो । जीवनको उदेश्य र त्यसलाई जिउने सर्वोत्तम तरिका बुझ्नु हो ।’
आज कस्तो छ योग ?
आज योगको लहर चलेको छ, विश्वभर । हरेक घर-घरमा योग गर्नेहरु बढेका छन् । अहिले धेरै मानिसहरु किन योग गर्छन् ? किन उनीहरुले योग अभ्यासलाई अपनाइरहेका छन् ?
किनभने उनीहरुको रोगबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् । कतिपय रोगले ग्रस्त छन् । आफुलाई गाँजेको रोगबाट उन्मुक्ती पाउनका लागि धेरैले योग गरिरहेका छन् । कतिपय संभावित रोगको घेरमा छन् । उनीहरु संभावित रोगबाट बच्न योग गरिरहेका छन् । भनौं, योगलाई धेरैले रोगबाट उन्मुक्ति पाउने बाटोको रुपमा बुझेका छन् ।
कतिपयले सुडौल शरीरका लागि पनि योग गरिरहेका छन् । योग गरेपछि, लचिलो, छरितो र सुडौल शरीर हुन्छ भन्ने सोचेर योग गरिहेका छन् ।
अहिले धेरैजसो मानसिक रोगले ग्रस्त छन् । मानसिक विकार बढेको छ । डिप्रेसन, चिन्ता जस्ता समस्याले धेरैलाई सताएको छ । उनीहरु यस्तै मानसिक विकार हटाउन योग गरिरहेका छन् । मनको शुद्धिकरणको माध्यामको रुपमा योगलाई अपनाएको छन् ।
शारीरिक रुपमा फिट रहन, निरोगी रहन, मानसिक रुपले शान्त रहन योग विधी अपनाउने जमात बढ्दो छ ।
योगको अनेक विधी र अभ्यास छन् । अहिले प्रचलित योग अनेक किसिमका छन्, हठ योग, अथ्यंगर योग, अष्टांग योग, विन्यास योग आदि । यी सबै योगको लक्ष्य एउटै देखिन्छ, शारीरिक फिटनेस र शान्ति ।
त्यसैगरी अहिले मानिसले आफु अनुकुल योग विधीहरुको विकास गरेका छन् । कतिपय कुकुरसँग योग गर्न जान्छन् । यसलाई डग योगा नाम दिएका छन् । कतिपय न्युड योगाको अभ्यास गरिरहेका छन्, निर्वस्त्र भएर । जर्मनीको राजधार्नी बर्लिनमा बीयर योगाको ट्रेन्ड सुरु भएको छ ।
यस किसिमको अभ्यास र प्रयोगले योगलाई विश्वव्यापी बनाउँदै लगेको छ । तर, योगको असली महत्व र स्वरुप भने हराउँदै गएको छ ।
योगा र ध्यानले हाम्राे स्वास्थ्यमा यस्ताे परिवर्तन साथै क्यान्सरको जोखिम पनि कम गर्छ
पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने सजिलाे तरिका
Don't Miss it खाना खादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
Up Next एभोकाडो खानुका फाइदा देखि यसकाे खेति प्रविधि बारे सबै जानकारी
गर्भपतनले शरीरमा, यस्ता समस्या निम्त्याउछन
गर्भपतन भएको नभएको र भ्रुणको अवस्थाबारे भिडियो एक्सरेबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।  पिसाब जाँचबाट गर्भ रहेको या नरहेको थाहा पाउन…
खाली पेटमा खानु नहुने खानेकुराहरु, यस्ता छन्
१ . शखरखण्डः यसमा टोनिक र प्याक्टिन हुन्छ जुन खाली पेट हुँदा पच्दैन । यसले छाती पोल्ने समस्या निम्तिन सक्छ…